FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AVY ANY PORTIOGALY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika avy any Portiogaly
Patriota de Viamonte ny volo tariby Podengo Pequeno Portigey amin'ny 1 taona.
Portigey Podengo Pequeno Portiogey
Wirehaired Portigey Podengo Pequeno
Portiogey Podengo Medio
Portiogey Wirehaired Podengo Medio
Portigey malefaka Podengo Grande
Portiogey Wirehaired Podengo Grande
Podengo Portugueso Grande = Harana Portiogey lehibe
Podengo Portugueso Medio = Horo Portiogaly antonony
Podengo Portugueso Pequeno = Toro kely Portiogey
Houndan'ny guese anao
Misy habe telo ny Podengo Portugueso: Grande (lehibe), Medio (medium) ary Pequeno (kely). Ny Medio Podengo Portugueso dia karazana fahitana somary antonony manana loha sahaza, karan-doha fisaka ary fijanonana mihonona. Volontany matetika ny orona, nefa mety mainty. Ny sofina dia lehibe, mitsangana voajanahary, telozoro ary finday be, mandroso handrenesana feo. Mahitsy ny vavahady. Hozatra sy malaza ny tratra. Ny maso kely sy mivalona dia volontsôkôlà miloko tantely. Ny tongotra tahaka ny saka dia misy rantsantongony voahodina tsara miaraka amin'ny pads mafy sy mafy. Ny tsipika aoriana dia misy andohalambo kely fotsiny. Ny hatoka dia matanjaka sy hozatra tsy misy dewlap. Rehefa milamina ny alika dia mihantona ny rambony rehefa mientanentana ilay alika na mihetsika ny rambony dia marindrano. Ny palitao dia misy karazany roa: malama sy mifono tariby. Ny palitao malama dia mafy sy lava kokoa noho ny an'ny ankamaroan'ny masonkarena maso. Ny palitao misy wirehaire dia lava, marefo ary maditra. Ny loko dia mety ahitana mavo, volondavenona na mainty misy marika fotsy.
Ny Podengo Portugueso Medio angamba no Podengos telo haingana indrindra. Alika manan-tsaina sy velona izy io. Be herim-po sy mpiambina tsara izy io ary be fitiavana, manao namana tsara. Tompon'ny Portiogey maro no mankasitraka ny Medio noho ny rahalahiny roa, ny Grande sy Pequeno satria mahatsapa izy ireo fa mety ny habeny - tsy dia lehibe loatra ary tsy dia kely loatra. Na inona na inona habeny, ny Medio dia alika mpiara-dia mahafinaritra ary mpihaza mahomby. hifanerasera ity karazany ity amin'ny mbola kely ary aza hadino ny mampianatra azy fankatoavana tsotra toy ny mandeha amin'ny tadiny . Mila a mafy orina, fa milamina , mpandray fitokisana, tsy miovaova. Anarana canine amin'ny fifandraisan'olombelona tena ilaina.
Haavony: 8 - 12 santimetatra (20 - 31 cm) kely
Hahavony: antonony 15 - 22 santimetatra (39 - 56 cm)
Haavony: 22 - 27 santimetatra (55 - 70 cm) lehibe
Milanja: 9 - 13 pounds (4 - 6 kg) kely
Milanja: Medium 35 - 44 pounds (16 - 20 kg)
Lanja: Lehibe 44 - 66 pounds (20 - 30 kg)
kisoa kibo feno vilany feno
Volo tena mahasalama. Satria ity karazana ity dia somary voafetra ihany ny fandraisan'andraikitra nataon'ny olombelona, ​​dia manana fihenan'ny aretina sy aretina nolovaina izy io.
Ny Podengo Portugueso Medio dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Ity karazana ity dia mety tsara amin'ny toetrandro mafana sy mafana ary afaka miaina sy matory any ivelany raha mbola manana fialofana ampy izy ireo.
Ity karazany haingana sy mavitrika ity dia mila fanatanjahan-tena isan'andro, ao anatin'izany ny isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Mila fikarakarana kely ny Podengo Portugueso Medio. Indraindray manosotra sy miborosy mba hanala ny volo maty sy malalaka. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Podengo Portugueso dia misy karazany telo: ny Grande (lehibe), Medio (medium) ary Pequeno (kely). Misy fiaviany roa mety hitranga amin'ny Podengo Portugueso rehetra. Ny Grande, izay nivoaran'ny Medio sy i Pequeno, dia mitovy amin'ny fahitana maso miloko toy ny Faraona Hound , izay niely nanerana an'i Afrika Avaratra ka hatrany amin'ny Saikinosy Iberia. Na izany aza, ny Podengo dia mety ho taranaky ny amboadia bitika kely. Na dia tsy dia fahita firy aza ny havana akaiky indrindra an'i Medio, ny Podengo Grande, dia mbola alika malaza io hound velona sy mailo ary mailo hatrany, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra avaratry Portugal. Indraindray dia mbola ampiasaina ho mpihaza lalao kely any ihany. Nihaza amina fonosana na irery, nanjary nahay nihaza bitro ny Portiogey Hounds. Ny fidiran'ny olombelona amin'ny fiompiana dia nampihena ny haben'ny Medio, ary namela ny toetra hafa tsy simba. Any Portugal, ireo alika ireo dia ampiasaina amin'ny fihazana, famonoana, fiambenana ary fiaraha-miasa. Anaram-bosotra hoe alika bitro portiogey no anarany. Ity karazana ity dia neken'ny AKC tamin'ny 2004
PPCA = Club Podengo Portiogey any Amerika
Vasco de Viamonte Tompondakan'ny maro Portigey, Podengo Pequeno, 11 taona.
Havia: Alfonso De Viamonte 'Orange' (lahy) —Manana: Black Valley Orange 'Beca' (vehivavy) —Foto nahazoana lalana avy amin'i Viamonte Podengos
Cashew, Hound Portiogey kely fohy, sary natolotry Judy Wagers
PORT. CH. Neco De Plushcourt (lahy), Naterak'i Antonio Rogado, fananan-dRamatoa Betty Mpitsara an'izao tontolo izao malaza Plushcourt Kennel, sary natolotry ny Viamonte Podengos
'Ity no Raposa, izay ilay teny portogey hoe' fox 'na' foxy, 'fa azonao antsoina hoe Repo izy. Repo dia teratany portugey lehibe. '
'Nalaiko teo akaikin'ny dobo teo amin'ny toeram-pambolen'ny Podengo Portiogey ity sary ity. Scrubby no anarany ary alika mpamonjy izy. Ny alika tsara indrindra eran'izao tontolo izao. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Hound Portiogey
Sary Hound Portuguese: 1
Sary Hortugis Hound 2
amerikana bulldog amerikana pitbull mix
ohatrinona ny haben'ny bichon frize
Anarana alika miteraka manaraka ny abidia
st bernard afangaro amin'ny laboratoara
ny saoka japoney sy ny mixing pekingese